FBC - Daandiin Xiyyaaraa Itiyoophiyaa gara Maanchistar- Kibba Ingilaanditti tajaajila balalii dabaluuf jedha
Daandiin Xiyyaaraa Itiyoophiyaa gara Maanchistar- Kibba Ingilaanditti tajaajila balalii dabaluuf jedha
Finfinnee, Caamsaa 6, 2010 (FBC) Daandiin Xiyyaaraa Itiyoophiyaa Bititeen Gamtaa Awrooppaa keessaa osoo hin-ba’in ji’ootaan dura Mudde dhufutti gara Kibba Ingilaand- Maanchistaritti tajaajila balalii isaa biyyattiitti lamaffaa ta’e nijalqaba; daandiin xiyyaarichaa gara Landonitti balalii erga jalqabee waggoota 45 booda.
Tajaajilli balalii Finfinneedhaa ka’uun kennamu kun torbanitti si’a afur, jalqaba akka damee balalii gara Biraasalsittiitti akka raawwachiifamu daandiin xiyyaarichaa ibsa kenneen eereera.
Daandiin Xiyyaaraa Itiyoophiyaa Afriikaa keessatti maamiltoota qabuun adda-duree ta’e, hidhata balalii magaalota guguddoo addunyaa 67 wal-quunnamsiisu uumeera; Afriikaa keessaas bu’uura isaa Finfinnee godhatee iddoowwan 60 ga’anitti tajaajila balalii kennaa jira.
Daandiin Xiyyaaraa kun akka ibsetti waggaa waggaan namoonni 400,000 Maanchistar irraa gara Afriikaatti imalu.
Hoji-geggeessaan daandii xiyyaarichaa Tawalde Gabramaariyaam akka jedhanitti balaliiwwan jalqabaa gabaa isaa qorachuuf balalii gara Biraasals waliin wal-faana geggeffamu; tajaajilli kallattiis waggaa dhufu keessa nijalqaba.
Hoji-geggeessan kun Gamtaa Awurooppaa keessaa ba’uun Biriteen dhiibbaa uuma jedhanii akka hin-yaadne eeruun, tajaajilli kun kallattii lamaaniinuu daldala, investimantii fi tuurizimii akka si’eessu ibsaniiru.
Oduuwwan Biroo « Magaala Bishooftuutti sheediiwwan seeran ala qabaman saamsaman	Daandileen Xiyyaaraa Itiyoophiyaa fi Kotidivuwaar imaltoota wal-harkaa fuudhuuf waliigalan »